Blive - デンマーク語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: blive (デンマーク語 - ビルマ語)
(Men Silas besluttede at blive der.)
သို့သော်လည်း၊ သိလသည် အလိုအလျောက် နေရစ်၏။
Sporet vil blive forlænget i dets slutning.
Metode som vil blive anvent til at dele spor
Billede for stort til at blive gemt som ICO
ICO လို သိမ်းဆည်းထားဖို့ ရုပ်ပုံ အရမ်းကြီးတယ်
_Liste over dele som vil blive oprettet:
_L အပိုင်းများ ပြုလုပ်ရန်စာရင်း
Angiv drevet der vil blive brugt til brænding
သင်တို့သည် အခွင့်သည်အမှုမှာ ကဲ့ရဲ့စရာ အကြောင်းမရှိစေနှင့်။
သူ၏သားတို့သည် ဘသားဆိုး၊ မယားလည်း မုတ်ဆိုးမဖြစ်ပါစေ။
Beskyt dette faneblad mod at blive trukket af musemarkøren
ဒီစာအမှတ်ကို ကြွတ်ခလုတ်နဲ့ ဒရွတ်ဆွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ
ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို ခံရသောသူသည် အကြင်အမှုကို လုပ်နေ၏။ ထိုသို့လူတိုင်းလုပ်နေစေ။
ထိုထမ်းဘိုးကိုလည်း သေတ္တာရွှေကွင်းထဲက မနှုတ်အစဉ် ရှိစေရမည်။
Disken i "%s" har behov for at blive genindlæst.
"%s" မှခွေကို ပြန်ဆွဲတင်ဖို့လိုသည်
Hvis du lukker vinduet, vil ventende job ikke blive udskrevet.
အကယ်၍ ဝင်းဒိုးကို ပိတ်လျင် စောင့်ဆိုင်းနေသော ပုံနှိပ်ခြင်းအလုပ် ပုံနှိပ်မည် မဟုတ်ပါ
အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားကို ပဌနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ရကြလတံ့။
hans Livsdage blive kun få, hans Embede tage en anden;
သူ၏အသက်တိုပါစေ။ သူ၏အရာကိုလည်း အခြားသူရပါစေ။
De valgte kontakter i listen til venstre vil blive sammenkædet.
လက်ဝဲဘက် စာရင်းမှ ရွေးထားသော အဆက်အသွယ်များကို အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မည်။
Hvis aktiveret vil den valgte farveovergang blive brugt til alle værktøjer.
Hvis aktiveret vil det valgte mønster blive brugt til alle værktøjer.
i am not understand in your life (英語>タミル語)nolite ergo solliciti esse (ラテン語>英語)kali mirch sabit (英語>テルグ語)okay, dear (英語>スワヒリ語)haveanice dream ‚ too (英語>インドネシア語)ander woord vir enige (アフリカーンス語>英語)tagalog of feeble (英語>タガログ語)my telephone nummer: (英語>簡体字中国語)si podemos (スペイン語>ケチュア語)kal le lena (ヒンズー語>英語)on (エストニア語>ヒンズー語)oak (ギリシア語>英語)can i come tomorrow to attend interview (英語>ヒンズー語)si mi amore (イタリア語>ドイツ語)it means alot to me (英語>ヒンズー語)hindi ko kaya ang gusto mo (タガログ語>英語)coeur brise (フランス語>英語)fright (英語>タガログ語)intravenous fluids (英語>タガログ語)en (カタロニア語>ロシア語)i choose to be happy (英語>ポルトガル語)kinatatalungkuang giray (タガログ語>英語)peace be upon you (英語>マレー語)te (ルーマニア語>イタリア語)matcha green tea (タガログ語>英語)